एप्पलकोे नयाँ उत्पादन - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
एप्पलकोे नयाँ उत्पादन
प्रकाशित मिति : बुधबार, भदौ २५, २०७१
विश्वमा यतिबेला आईफोन र मोवाइलको क्रेज बढिरहेको बेलामा चर्चित अमेरिकाको एप्पल कम्पनीले आइफोन सिक्स, आइफोन सिक्स प्लस र पहिलो स्मार्टवाच मोडेल मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । १६ जिबीको मुल्य १९९ डलर र ६४ जिबीकोे मुल्य २९९ देखि ३९९ डलरसम्म हुने कम्पनीका सिईओ टिम कुकले बताएका छन् ।
आइफोेन सिक्सकोे मोटाई ६.८ एमएम र आईफोन सिक्स प्लसको ७.१ मोटाई रहेको छ । आइफोन सिक्स, सिक्स प्लस र पहिलो स्मार्टवाचको क्षमता क्रमशः १६, ६४ र १२८ सम्म बढाउन मिल्ने बनाएको छ ।
२४ घण्टामा लगातार १० घण्टा इन्टरनेट, २४ सै घण्टा कुुराकानी गर्दा र १२ घण्टा वेव ब्राउजिङ समेत चलाउदा पनि ब्याट्री धान्न सक्ने छ । खिच्दा हल्लिएकोे वा धमिलो आएको फोटोहरुलाई राम्रो बनाउन मिल्ने, अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन पनि राखिएको आइफोेन सिक्स र प्लस दुवैमा बारोमिटर पनि जडान छ ।
अहिलेसम्मकै सवै भन्दा पातलो र ठुलो साइज रहेको उक्त आइफोन सिक्सको स्क्रिन ४.७ इन्च र सिक्स प्लसकोे ५.५ इन्च रहेकोे छ । यिनीहरुकको डिस्प्ले स्क्रिन क्रमशः ११३६ *६४० पिक्सेल रेजुलेशन र १९२० * १०८० पिक्सेल रेजुुलेशन सहित निकै आर्कषक बनाएको छ ।
उक्त आइफोेनहरु अमेरिकामा सेप्टेम्वर १७ बाट बजारमा बिक्री गर्ने कम्पनीले जनाएकोे छ भने एसियन मुलुक भारतमा सेप्टेम्वर २६ देखिबाट बिक्री वितरण गरिने जानकारी दिएको छ ।
यस्तो छ १० जना बस्न मिल्ने बाइक, यसको इन्जिन नै ७ वोटा !
अमेरिकी चुनावको पूर्वसन्ध्यामा फेसबुक बन्द !!